Horumar xagga ruuxa ah waxaa lagu helaa aqoon: aqoontu waxay u kacdaa xagga ALLAH, maxaa yeelay, Ilaah waa aqoon dhammaystiran
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 16, 2020 00: 00 1 Comment
Helitaanka aqoonta lagama maarmaanka ah markaa Ilaah baa u soo dhowaanaya. Aqoonta aasaasiga ah waxay maskaxda u horseedaa heerar sare. Waxay u keentaa miyir sare iyo baraarug. Tani waxay u oggolaaneysaa inuu horumariyo oo dhammaystiro shaqsigiisa.
Aqoontu waxay keentaa caddeyn. Waxay noo oggolaaneysaa inaan fahamno adduunka aan ku nool nahay iyo ujeeddadiisa. Waxay kicisaa oo kor u qaadaa miyirka. Waxay ka badbaadisaa dadka saameynta xun waxayna ka dhigtaa inuu iskiis u madax banaanaado.
Aqoontu waxay keentaa karti marka la dhaqan galiyo. Waxay kaa caawineysaa go'aaminta sida ugu wanaagsan ee loo sii wadi karo si loo helo natiijo faa'iido leh. Kadib qofku wuxuu horumarin karaa dabeecad wanaaga wuxuuna gartaa kartidiisa.
Aqoontu waxay keentaa wada noolaansho. Waxay keenaysaa isku-dheelitirnaan iyo midnimo u dhaxaysa xoogagga iyo shakhsiyaadka. Sababta oo ah bani aadamku wuxuu bartaa in wax walba loo abuuray ujeedo gaar ah, sidaa darteed wuu ixtiraamayaa abuurista iyo wax kasta oo soo koobaya.
Aqoonta aasaasiga ah waa xigmad aan laga soo koobi karin. Sababta oo ah xigmaddu waa garasho, adeegsi iyo gudbinta aqoonta.
Raadi inaad ku guuleysato horumarkaaga ruuxiga ah sidii Nin ahaan.
ILAAHAY wuxuu idinka soocay abuur kale oo wuxuu ku siiyay awood muuqaal.
ILAAHAY wuxuu sidoo kale ku siiyay aqoon kuu saamaxeysa inaad kadhigto oo aad shakhsiyadaada ku fiicnaato.
ILAAHAY wuxuu kaa baryayaa inaad isbedesho oo aad horumar sameysatid inta aad nooshahay. Waa iyada oo loo maro aqoonta muhiimka ah ee aad ku gaadhi karto horumarkaaga ruuxiga ah.
Raadi aqoon muhiim ah, fahanto, ku dhaqan geli. Noloshaada masuul ka noqo, noqo mid hal abuur leh oo wax dhisa. Tani waxay kuu soo dhoweyn doontaa adiga abuurahaaga
Asalnimada geesiyada Afrika, timo qurxinta yurubiyanka ayaa moodada u ah inta badan gabdhaha iyo haweenka madow ee Afrikaanka ah
Sep29 09: 23